Free Visa Courtiers for Myanmar Citizen. Part2– YANGON STYLE
Free Visa Courtiers for Myanmar Citizen. Part 2
မြန်မာနိုင်ငံမှ Visa မလိုဘဲ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မည့် (၁၄) နိုင်ငံ များအကြောင်း (၂)
“ အင်ဒိုနီရှား သမ္မတနိင်ငံ” သည် အိမ်နီးချင်း အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြို့တော် ဂျကာတာတွင် မြန်မာသံရုံးကို ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ လူဦးရေထူထပ်မှုသည်အဆင့် (၄)တွင်ရပ်တည်နေသော အစ္စလာမ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီရှားအစားအစာများသည် ကမ္ဘာကျော်ကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲ ရက်ပေါင်း ၃၀အထိ လည်ပတ်ခွင်ပြုထားပါသည်။ ၂၇၆၅.၇၀ ကီလိုမီတာခန့် ရန်ကုန်မှ ကွာဝေးသည်။
“ လာအိုနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) လောနိုင်ငံ” သည်ရန်ကုန်မှ ၇၄၃.၃၅ ကီလိုမီတာသာ ကွာဝေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာကို အဓိကအားဖြင့် ယုံကြည်သက်ဝင်ကြသည်။ ဗီယင်ကျန်းသည် နိုင်ငံ၏ မြိ်ု့တော်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဆိုလျှင် ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲ ၁၄ရက်အထိ နေထိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။
“ မိုက်ခရိုနီးရှား ဖရယ်ဒယ်ပြည်ထောင်စု” သည် သြစတေးလျားနိုင်ငံ မြောက်ဖက် ၂၉၀ဝ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ ပါလီကာဖြစ်သည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ပြီး ငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်အသုံးပြုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲ ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိနေထိုင်လည်ပတ်နိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှ တိုင်းတာလျှင် ၁၅၉၈၄.၄၃ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
“ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိင်ငံ” အရှအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ကျွန်းစုများ စုစည်းထားသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြို့တော်မှာ မနီလာမြို့ဖြစ်ပြီး ရိုမန်ကတ်သလစ်ဘာသာကို အဓိက ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနှင့် ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲ ရက်ပေါင်း ၃၀ နေထိုင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ရန်ကုန်နှင့် ဇိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အကွာအဝေးမှာ ၂၇၈၃.၉၁ ကီလိုမီတာဖြစ်ပါသည်။
“ စိန်ဗင်းဆင့် နှင့် ဂရိနေဒိုင်း နိုင်ငံ” သည် အန်တေးကျွန်းငယ်များ အစုအဝေးတွင်ရှိ်ပြီး ကျွန်းပေါင်းများစွာကို စုစည်းထားသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကင်းစ်တောင်သည် နိုင်ငံ့မြိ့တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှ ၁၅၈၉၅.၅၆ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဗီဇာကင်းလွှတ်ခွင့်နှင့် ၁လအထိ လည်ပတ်နေထိုင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် အသေးဆုံးနှင့် အဖွံ့ဖြိ်ုးဆုံး အာဆီယံနိုင်ငံမှာ “ စင်္ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ” ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပါတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ရက်ပေါင်း ၃၀ ဗီဇာကင်းလွှတ်ပေးထားသည်။ ၁၉၁၀.၄၅ ကီလိုမီတာခန့် ရန်ကုန်မှ ကွာဝေးပါသည်။
“ ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံတော်” ခေါ် ယိုးဒယားနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ကိုလိုနီလက်အာက်မကျရောက်ခဲ့သော တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေပြီး လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် သွားရောက်လျှင် ဗီဇာကင်းလွှတ်ခွင့်ဖြင့် ၁၄ရက်အထိ နေထိုင်လည်ပတ်ခွင်ပြုထားပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများ အများဆုံး သွားရောက်သော ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
“ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ”သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော အာဆီယံနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Halong Bay နှင့် Old Quarter သည်နာမည်ကြီး လည်ပတ်စရာ နေရာများဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး မြို့တော်မှာ ဟနွိုင်းဖြစ်သည်။ Visa မလိုအပ်ဘဲ (၁၄)ရက်အထိ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ရန်ကုန်မှ ၁၃၃၂.၇၄ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။